Itiopiya inotungamira Africa mune vafambi uye vekutakura zvinhu panguva yeCOBV-19 dambudziko
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Ethiopia Kupwanya Nhau » Itiopiya inotungamira Africa mune vafambi uye vekutakura zvinhu panguva yeCOBV-19 dambudziko
Sekureva kwemushumo weAfrican Airlines Association's (AFRAA), Ethiopia yakapihwa chinzvimbo chekutanga nevatakuri nemotokari dzemitoro muna 2020.
Itiopiya yakatakura mazana mashanu ezviuru zvematani ekutakura uye 500 mamirioni evatakuri kuburikidza neayo main hub, Addis Ababa Bole International Airport.
Iyo inotakura zvinhu inobata anopfuura mazana zviuru mazana mashanu ematani ekutakura mukati megore ra500.
Itiyopiya yakawedzerawo pamazita munyika dzakabatana zvikuru muAfrica.
Etiopiya Airlines Boka, nendege hombe yePan-Africa, yave pamusoro soro muAfrica
yendege mune yevafambi neyekutakura zvinhu ichengetedze chinzvimbo chayo chehutungamiriri mukondinendi.
Sekureva kwemushumo weAfrican Airlines Association's (AFRAA), muEthiopia akapihwa chinzvimbo chekutanga nevatakuri nemotokari dzinotakura zvinhu muna 2020. Itiopiya yakatakura zviuru mazana mashanu zvematani ekutakura uye 500 mamirioni evatakuri kuburikidza nemuzinda wayo mukuru, Addis Ababa Bole
Etiopiya Airlines Boka CEO Tewolde Gebremariam akati, “Tinokudzwa
enderera nehutungamiriri hwedu kunyangwe panguva yeGlobal Pandemic Crisis iyo yakaparadza indasitiri yendege. Ichi chiratidzo chekushinga kwedu uye nekukurumidza. Isu tinofara nebasa ratakaita pakurwisa denda iri nekuenderera mberi nekubatana kwatinoita mukati meAfrica uye nepasi rose pasina kumiswa kwendege. "Tiri kuponesa hupenyu kuburikidza nekutakura nendege mishonga uye majekiseni."
Etiopiya Airlines ndiyo yakasimudza runyorwa nemotokari yepamusoro yevatakuri inotakurwa kuburikidza neAddis Ababa Bole International Airport. Vafambi vanosvika mamirioni 5.5 vakatakurwa kuburikidza nendege. Pamugwagwa uyu, muEthiopia akatakura vafambi vanosvika mamirioni mashanu nemakumi mashanu nevaviri vakasara vakatakurwa nedzimwe ndege Iyo inotakura zvinhu inobata anopfuura mazana zviuru mazana mashanu ematani ekutakura mukati megore ra5.2.
Itiyopiya yakawedzerawo pamazita munyika dzakabatana zvikuru muAfrica nekuda kwenhamba huru dzendege dzakananga mukati mekondinendi.